Isiseko kunye nomgaqo wokufudumeza kokufudumeza, yintoni ukufudumeza kokufudumeza
Siseko ukutshisa umgangatho wokupasa ziye zaqondwa kwaye zafakwa kwimveliso ukusuka kwi-1920s. NgeMfazwe Yehlabathi II, i-teknoloji yakhula ngokukhawuleza ukuba ihlangabezane neemfuno zexesha eliphuthumayo leemfazwe zenkqubo yokukhawuleza, enokwethenjelwa kwiinkampani zensimbi zomelele. Ngoku kutshanje, kugxininiswa kwindlela yokuvelisa ngokunyamekileyo nokugxininiswa ekulawuleni umgangatho ophuculweyo kukhokelela ekubuyiseleni ubuchwepheshe bokungeniswa, kunye nokuphuhliswa ngokuchanekileyo, yonke imeko ukunikezwa kwamandla okushisa.
Ukufudumala okutshatyalaliswayo kuqhutyelwa kwinto yokuqhuba umbane (kungekhona imithombo yensimbi) xa loo nto ifakwe kwindawo enemimandla. Ukufudumeza ukutshisa ngenxa ye-hysteresis kunye nelahleko zangoku-eddy.
Ilahleko yeHysteresis yenzeka kuphela kwizinto ezinamandla ezinje ngentsimbi, i-nickel, kunye nezinye ezimbalwa kakhulu. Ukulahleka kweHysteresis kuchaza ukuba oku kubangelwa kukungqubana phakathi kweemolekyuli xa izinto zibutsalane kuqala kwicala elinye, zize kwelinye. Iimolekyuli zinokuthathwa njengeemagnethi ezincinci ezijika jika kulungelelwaniso ngalunye lwendlela kumazibuthe. Umsebenzi (amandla) uyafuneka ukubaguqula. Amandla aguquka abe bubushushu. Ireyithi yenkcitho yamandla (amandla) inyuka ngenqanaba elonyukayo lokuguqula (ukubanda).
Ilahleko zangoku ze-Eddy zenzeka nakweyiphi na into yokuqhuba kwindawo eyahlukileyo yemagneti. Oku kubangela isihloko, nokuba izinto azinazo naziphi na iipropathi zemagnethi zihlala zinxulunyaniswa nentsimbi kunye nentsimbi. Imizekelo yeyobhedu, ubhedu, ialuminiyam, zirconium, intsimbi engenasiphene kunye neuranium. Imijelo ye-Eddy yimisinga yombane eyenziwe yintshukumo yenguqu kwizixhobo. Njengoko igama labo lisitsho, kubonakala ngathi zijikeleza zijikeleze ii-swirls kwii-eddies ngaphakathi kobunzima bezinto. Ilahleko zangoku ze-Eddy zibaluleke kakhulu kunelahleko ye-hysteresis ekufudumaleni kwe-induction. Qaphela ukuba ukufudumeza ngokungeniswa kusenziwa kwizixhobo ezingafunekiyo zemagnetic, apho kungekho lahleko ye-hysteresis eyenzekayo.
Ukufudumala kwensimbi ukwenzela ukuqina, ukugungqa, ukuncibilika, okanye nayiphi na injongo efuna ukushisa ngaphezu kweqondo lokushisa kweCurie, asikwazi ukuxhomekeka kwi-hysteresis. I-Steel ilahlekelwa iimpawu zayo zamagnetic ngaphezu kweli bushushu. Xa isinyithi sishushu ngaphantsi kweCurie iphuzu, umnikelo we-hysteresis uhlala uncinci kangangokuthi unganakunyuswa. Kuzo zonke iinjongo ezifanelekileyo, mna2R weendlela ezihambayo yindlela yokuphela kwamandla kagesi anokuguqulwa ukushisa ukulungiselela ukushisa.
Izinto ezibini eziphambili zokushushumbisa i-induction ziya kwenzeka:
Intsimi yokuguquka yamandla
Izinto eziphathekayo zombane zifakwe kwi-magnetic field